မြစ်ဆုံ(သို့) ဧရာဝတီမြစ် ရဲ့ အပြစ်လား? « Search
Bookmark the permalink.	မြစ်ဆုံ(သို့) ဧရာဝတီမြစ် ရဲ့ အပြစ်လား?
by kachinwaves	မလိယန်ကျေးရွာသည် ယခုအောင်မြင်သာ စံပြရွာသစ်၏ မြစ်တဖက်တွင်ရှိသောရွာဖြစ်သည်။ ယင်းရွာတွင် တောင်ယာခုတ် လယ်လုပ်ရင်း ၀ါတောစိုက်ရင်း အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေသည့်နယ်ခံရွာ အိမ် ထောင်စု ၁၀ အိမ်ရှိသည်။ အဆိုပါရွာသားများ၏ ၀ါးတောများကို မြေတူးစက်ကြီးများဖြင့် တူးဆွ၊ ထူးကော်ပေးပြီ ရေကာတာ၏ရေပိုလွဲလမ်းကြေင်းတွင် ကျရောက်သောရွာ ဖြစ်သည့်ဒေါင်ဗန်ကျေးရွာနှင့် အောင်ဂျာယန်ကျေးရွာ များအတွက် ရွာသစ်တည်ထောင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုရွာတည်ထောင်ခဲ့သော နေရာမှာ မလိယန်ရွာသားများရဲ့ ၀ါးတောများဖြစ်ကြသည်။ ဒေသခံများကို မည်သည့်အကြောင်းမှရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမရှိပဲ ၂၀၁၀ မေလ တွင် လာရောက်ထူးကော်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တုန်းက ဦးဒါရှီဂမ်ဆိုင်းမှ ဓားပလိုင်လွယ် ကာ ကျေးဇူးပြုပြီး မကော်ပေးကြပါရန်၊ ၀ါးတောဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်ဟု အနူးအညွတ် တောင်းပန်ခဲ့သည်။ကချင်တောင်သူမှန်ရင် ဓားပလိုင်လွယ်မြဲ ဖြစ်သော်လည်း ဦးဒါရှီဂမ်ဆိုင်းအား ဓားကိုင်ကာလာရောက်ကြိမ်းမောင်းသည့်ဟု စွပ်စွဲခြင်းခံခဲ့ရသည်။